एसईईको तयारी पूरा, दुईथरि प्रश्न सोधिने ? - Chandragiri News
Home शिक्षा एसईईको तयारी पूरा, दुईथरि प्रश्न सोधिने ?
२०७४, २७ फाल्गुन आईतवार २१:४३
काठमाडौ, फागुन २७—यसपटकको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा दुईथरि प्रश्न सोधिने भएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कुल ८ सय पूर्णांकको पुराना विद्यार्थीलाई पुरानै प्रश्नपत्र र नयाँ विद्यार्थीलाई नयाँ प्रश्न सोध्न लागिएको जनाएको छ।
कक्षा १० को पाठ्यक्रम परिवर्तन भएसँगै प्राक्टिकल गर्नुपर्ने विषय पनि थपिएका छन्। रेग्मीका अनुसार अनिवार्य ६ वटा विषयमध्ये ५ वटामा प्राक्टिकल हुनेछ। ऐच्छिक विषयमा पनि प्राक्टिकल हुन्छ। नेपालीमा पनि कुल सय पूर्णांकमध्ये ७५ नम्बरको सैद्धान्तिक र २५ नम्बरको प्राक्टिकल हुनेछ। ‘अब गणितमा मात्र प्राक्टिकल हुँदैन’, उनले भने।, यो खबर आजकोअन्नपुर्ण पोष्टमा छ । अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।
Previous articleकिसिपिडी युथ क्लबको दोस्रो प्रस्तुत “किसिपिडी नाइट”
Next articleअवतरणको क्रममा बंगलादेशबाट आएको विमान दुर्घटना